Ụbọchị: 19 November 2019
Ụlọ ọrụ na Technology Deputy Minister Mehmet Fatih Kacar, Turkey mbụ ọzụzụ center nke uwa-themed Gökmen Aerospace Training Center (GUHE m) e nyochara. Turkey njem na ụmụ ke aerospace ubi [More ...]
Ndị ọkwọ ụgbọ njem ọha na-ezukọ na ogige Adventure; Ọ bụ Ngalaba Na-ebugharị Publicgbọ njem Ọhaneze nke Ngalaba Na-ebugharị Ọchịchị Obodo. Ngalaba Transportgbọ njem Obodo Sakarya [More ...]
Companylọ ọrụ Turkey Bütem Metal, nke na-eme ụlọ elu nke ọdụ ụgbọ elu Istanbul, na-arụ ọrụ ugbu a na akwa ụlọ nke Dubai Metro. Bütem Metal, nke na-amị amị ọkụ, Mmiri a na-egbochi. [More ...]
Free Cable Car News na Ozizi na Bursa! Bursa Teleferik AŞ, nke na-enye njem njem ọzọ n'etiti Uludağ na etiti obodo, ga-eweta onye nkuzi nke 24-19 [More ...]
Ájị Road na Turkey, Russia-esi n'ọnụ ụzọ MI?; Ájị Road Project n'ime akporo nke China mbụ ibu ụgbọ oloko na Europe na-aga n'ihu na-aga echiche nke Turkey. Central korido ya bụ Turkey, China - n'etiti Europe [More ...]
Nke a bụ Metrobus ọhụrụ ..! Nwara Ekrem İmamoğlu; Onye isi oche İBB Ekrem İmamoğlu sonyere na usoro nnwale nke ụgbọ ala metrobus nke mpaghara na-emepụta. İmamoğlu, onye biaworo na njedebe nke 29 [More ...]
Atabar-ewere ọnọdụ n'etiti ụzọ nke Turkey kasị mkpa skai eme Ski Center na-akwadebe maka oyi oge. Gọvanọ Artvin Yılmaz Doruk, Artvin Gọvanọ nke 2 puku 200 elu nke Mersivan Mountain 2009 [More ...]
Sivas 2023 Afọ na Ankara site na Ọgbọ Ọsọ ọsọ site na ebea ruo Istanbul? Ọrụ Sivas - Ankara High Speed ​​Train (YHT), nke ọha na-atụsi anya ike, na-aga n’ihu n’iwe ọsọ ọsọ karịa ugbu a. gara aga [More ...]
The mbụ set of Siemens 'Mepụtara YHT Gịnị Na-eme na Turkey Oge?; Onye isi njikwa TCDD Transport Inc. Kamuran Yazıcı, nke mbụ n'ime usoro ụgbọ oloko dị elu, mgbe usoro nnwale ahụ gasịrị, ngalaba nke February 2020'den. [More ...]
İBB Onye na-anya ụgbọ oloko ga-eme ndị ọrụ ọrụ ọrụ ;; Obodo Obodo isi ala nke Istanbul ebipụtala ọrụ ọhụụ maka ndị na-achọ ọrụ na peeji IM. Otu n'ime mgbasa ozi mbanye nke onye ọ bụla na-esoro [More ...]
Na Istanbul, ihe karịrị otu puku 595 mmadụ mere njem ụgbọ oloko abalị. Ndị isi obodo kwuru na ụtụ ndị ahụ karịrị ihe a tụrụ anya ya. Obodo isi obodo Istanbul (IMM) 30 bidoro n'ọnwa Ọgọst na abalị nke 595 [More ...]
ISAF 2020 na-akwado ya na Mmepụta dị ịtụnanya; Uzo abuo di n’ihu mpaghara, ISAF 2020 ji nkwadebe di egwu dozie ndi nile sonyere na ndi nleta ndi choro iso mmepe. 8-11 2020 na October 24. N'otu oge ga-ewere ọnọdụ [More ...]
Mmalite dị na Ọrụ Transportgbọ njem maka Ndị Nwere Nkwarụ; Minista Turhan, na nzọụkwụ nke abụọ nke “Ka anyị Gee Childrenmụ Anyị Ntị, Gbanwee Ndụ Ha kapsamında ọrụ n'ime oke njem ụgbọ mmiri na - egbochi, njem na - egbochi, ndụ na - egbochi," 20 bụ ụgbọ oloko dị elu maka ndị mmadụ nwere mkpa pụrụ iche. [More ...]
Rictgbasochi Iwu Mpụga na-egbochi Snow n'okporo ụzọ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ elu na okporo ụzọ; Onye Minista Transportgbọ njem na akụrụngwa Cahit Turhan, Onye isi nchịkwa nke okporo ụzọ (KGM) mepere na Anti-Snow Center 68 puku 254 kilomita nke igwefoto netwọk okporo ụzọ na [More ...]